Volon'ondry → Akanjo fampiroboroboana • amboradara solosaina P&M matihanina
monja dia akanjo be mpitia, matetika natao ho singa maharitra asa na dokambarotra akanjo, izay manome fahafahana be kokoa ny hetsika noho ny palitao, raha miaro ny akanjo manokan'ny mpiasa.
Fleece dia vokatra tsara amin'ny amboradara solosaina
Ireo tombony ireo dia mahatonga ny volon'ondry ho be mpitia indrindra amin'ny orinasa maro. Izy ireo dia safidy matetika ho an'ny mpiasa, an'izany, amin'ny indostrian'ny famokarana, ny logistika ary ny fananganana, fa koa ho an'ny tanjona manokana ho akanjo azo antoka sy mafana amin'ny hetsika isan-karazany.
Volon'ondry Adler 506 an'ny lehilahy miaraka amin'ny mety misy peta-kofehy
Maromaro ny karazan-volon'ondry misy ao aminay fivarotana dia tonga amin'ny paleta miloko manankarena.
Misaotra an'ity dia azonao atao ny manitsy ny safidinao hamantatra izany amin'ny lokon'ny orinasa.
Ho fanampin'izay, afaka mametraka ny famonoana amin'ny volon'ondry ianao amboradain'ny solosaina. Izahay dia mivarotra ny modely vehivavy, lahy, ankizy ary unisex amin'ny habeny samihafa.
Fleece ho safidy matetika ho an`ny akanjo
Ny palitao volon'osy azo alaina ao amin'ny fivarotantsika dia amboarin'ny orinasa toy ny vary ary Leber & Hollman.
Manolotra modely marobe arakaraka ny safidin'ny tsirairay izahay - feno zip na feno fitaovana fotsiny amin'ny zipper fohy eo amin'ny hatoka, na misy kapaoty na tsy misy.
Maro ny modely manana amboara azo tanterahina azo ampiharina, izay miaro amin'ny hatsiaka, ohatra rehefa miasa any an-trano na ao anaty vata fampangatsiahana (mandritra ny fotoana fohy, raha toa ka miasa amin'ny fepetra ambany ny mari-pana, dia manoro hevitra izahay) akanjo ho an'ny fivarotana mangatsiaka sy carte frézer).
Ny sweatshirts maro avy amin'ny antokon-tsika dia manana poketra azo ampiharina miaraka amin'ny ziper, indrindra ankasitrahana amin'ny toe-javatra mihamitombo.
Isika manolotra ihany koa volom-borona amin'ny loko fampitandremana ary misy singa misaintsaina, izay malaza indrindra eo amin'ireo mpiasa an-dalambe, mpiasa amin'ny fananganana, sehatra samy hafa sy sehatra rehetra. Ny hatsembohana sasany dia manana sarina eo amin'ny valahany, ary tsy mamela hanitsy ny sweatshirt amin'ny endrika isankarazany ihany, fa koa amin'ny toetr'andro.
Ny volon'antoka amin'ny dokambarotra
Betsaka ny orinasa mankasitraka azy maha-olona sy manokana, indrindra raha toa ka mitana andraikitra amin'ny mpiara-miasa amin'ireo mety hisian'ny mpivarotra sy mpanjifa ny mpiasa.
Ny fomba fanamarihana amin'ny amboradara amin'ny solosaina amin'ny akanjo
Izany no antony mahatonga ny volon'ondry vita pirinty ho singa malaza amin'ny karazana hetsika an-trano ivelany, mijoro amin'ny solontenany, fihaonambe ary fanofanana.
Rehefa nanorina ny tolotra izahay, dia tsy hadinonay akory no faralahy. Ao amin'ny magazay no hahitanao volon'osy ho an'ny ankizy amin'ny loko sy habe samihafa. Izahay koa dia manao amboradara amin'ny akanjo miaraka amin'ny sary famantarana an-tsekoly sy klioba ho azy ireo.
Vangongo miaraka T-shirts no vokatra be mpidy indrindra ho an'ny marika manokana na ny fitafiany sy ny dokambarotra.
Manasa anao aminay izahay fivarotana, izay hahitanao ny feno asa vita amin'ny volon'asa sy ny doka dokambarotra.
Volon'ondry 4fvolon'ondry adlervolon'ondry vehivavyny volon'ondry tsara indrindrafitafiana volon'ondryvolon'ondrikovolon'ondry vehivavymiampy habe volon'ondry vehivavyVolon'ondry orinasaVolon'ondry vehivavy misy hoodvolon'ondry ho an'ny ankizypalitao volon'ondry ho an'ny zazavavyvolon'ondry ho an'ny mpiasavolon'ondry orinasasalama tec volon'ondryvolon'olombelonaparole volom-behivavyvolon'ondry miasa lehilahyvolon'ondry amin'ny fangatahanavolon'ondry taratrampanamboatra volon'ondryvolon'ondry fanaovana dokam-barotravolon'ondry miasamiasa volon'ondry Allegrovolon'ondry asa hita taratravolon'ondry afovolon'ondry miaramilavolon'ondry misy amboradaravolon'ondry misy sary famantaranavolon'ondry misy ny logo an'ny orinasavolon'ondry misy pirintyvolon'ondry misy pirinty an'ny orinasavolon'ondry mora vidy